5 amagama vs. 5 ubuxoki — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
5 amagama vs. 5 ubuxoki
Indlela esisabela ngayo umyalezo kuxhomekeke ekubeni ngubani na ukuba iphuma. Makhe ndininike umzekelo. Ukuba owasemzini uhamba kum esitratweni kwaye uthi, "Makhe ukuboleka izitshixo ukuba imoto yakho yokwenyani ngokukhawuleza. Ndifuna ukufumana imali kwibhokisi yakho isikhuseli,"Ndiya mhlawumbi khangela kwakhe nguye crazy uhambe ngaphandle. Kodwa ukuba inkosikazi yam ukuza kum uthi into enye, Ndingathanda ndimnike izitshixo ngaphandle ingcinga yesibini. Simamela kwaye aphendule ngokwahlukileyo ngokuxhomekeke ngubani uthetha.
Njani imeko enye. Ukuba omnye wabahlobo bam okulungileyo wamcenga ukuba umele anike igunya bakhe obufezekileyo phezu ubomi bam bonke, Mhlawumbi khangela kwakhe nguye crazy uye ukufumana abanye abahlobo abatsha. Kwaye kuya kuba kuhle ukuba asabele ngaloo ndlela. Kodwa kuthekani ukuba uThixo ngokwakhe wathi nto inye?
2 Timoti 3:16 uthi, "Sonke iSibhalo zingumphefumlo kaThixo." Loo nto na yonke le vesi, kodwa loo mazwi ezintlanu ndithi ngokwaneleyo ukuba sicamngce ngayo ebomini. Isibakala sokuba amazwi neZibhalo amazwi kaThixo ngokwakhe okuphawulekayo. Yaye ndiyacinga ukuba loo mazwi ezintlanu, "Sonke iSibhalo zingumphefumlo kaThixo,"Kusinceda silwe ezinye ubuxoki ukuba ngamanye amaxesha siliqonda ngayo iBhayibhile. Ndifuna ukujonga ezintlanu.
1. Kuba isibhalo nguThixo-waphefumlela ukuba akukho: uluvo
Abaninzi kuthi ukunyanga iBhayibhile ifana yincwadi ezele iingcebiso okanye ingqokelela amazwi obulumko. Bekuya kuba kuhle ukuba ukunyanga iBhayibhile ngale ndlela ukuba nje incwadi uphindo ukuba umntu ndawonye. Singenza akuva ngaye kwaye zibonisa iinxalenye esithanda. Kodwa akukho.
UThixo unegunya phezu umphefumlo zonke eziphilayo xa unika imiyalelo, bona amacebiso nje. Bona awunguye izimvo thina Ungakhetha noba okanye hayi uyirhumele. UThixo akafuni kuba "izimvo." Yena uThixo. Asukuba ezenza yena ucinga liyinyaniso.
2. Kuba isibhalo nguThixo-waphefumlela ukuba akukho: ephelelwe
Abantu abaninzi namhlanje ukuthetha iBhayibhile endala incwadi kunye iimbono endala ukuba sifanele ukuba elidlulileyo. Ukuya ku, oko kudla lohlaselo kwaye kwezinye iimeko ziphum okubi. abanye bathi, "Yinto ubudala - ukufumana oko unako kulo, kodwa musa ayithabathe ngokugqithiseleyo. "
inyaniso likaThixo elitsha. UThixo akamntu ukuba ngubani iphenjelelwa isicwangciso athile enkcubeko. UThixo ikwabamoyikayo, kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni. IBhayibhile endala kwaye ke kubhaliwe kwiinkcubeko ezahlukeneyo, kodwa yonke inyaniso kanye njengokuba kunjalo namhlanje. Ngoko umsebenzi wethu ukuba ngoyaba into akuthethi "fit thina" okanye abufani into esicinga yokuziphatha. Umsebenzi wethu kukuba ukufunda oko uThixo, bana phandle kuthetha ntoni kuthi, kwaye ungenise kulo.
3. Kuba isibhalo nguThixo-waphefumlela ukuba akukho: Just Information
Abanye bethu ezifana wezakwalizwi ngenxa yezizathu engalunganga. Siya iSibhalo ukuze sikwazi ukufunda izinto yaye uzive enzulu. Xa ufunda iSibhalo nto nje incwadi imbali, okanye incwadi yobulumko, okanye incwadi yamabali. Ke ezo zinto, kodwa akazange nje ezo zinto. Xa uthe wahlala phantsi kunye neLizwi, wena yokuhlangana noThixo. Ungaze ukufunda iLizwi likaThixo ngaphandle ngokwenene phambili ingqondo yakho. UThixo uthetha. mamela.
4. Kuba isibhalo nguThixo-waphefumlela ukuba akukho: -dinisa-dinayo
Ndicinga ukuba oku yeyona ngokwembono yesono ukuba sonke ukuba unetyala ngaxa lithile. Asifuni ukuba ukufunda iBhayibhile kuba ayithethi ngokwenene ingaxuthi kuthi. Oko akuthethi ukugcina ingqalelo yethu. Ndiza kuthi nje inye into: Njani oko uyadika ukubona uThixo!? Yinto ubungqina ungcamla zethu incasa yesono. Ibonisa ukuba neencasa zonke izinto eziphosakeleyo.
Makhe baguquke ukuba, trust Krestu, Ngani ukuba niwaxhaphaze ilungelo baya kumkhawulela uThixo.
5. Kuba isibhalo nguThixo-waphefumlela ukuba akukho: amandla
ILizwi likaThixo linamandla. Kwaba neLizwi laKhe, ukuba Yena wadala indalo iphela. Uthe, “Makubekho,” kwaye kwabakho. xa uYesu, UThixo uNyana, beza Umhlaba amandla eLizwi lakhe zibonwe ngokupheleleyo. Xa Wathetha iidemon abancedi, imimoya namaza esaba, basaba izifo, yaye abantu abafileyo wabuyela ebomini. ILizwi likaThixo linamandla kuchulumancisa.
Yinto LiLizwi likaThixo ukuba nabani na kuthi kusindiswa. UThixo usebenzisa iLizwi lakhe enamandla ukwaphula ezintliziyweni ebandayo abafileyo, ndibanike amehlo ukubona uYesu, ke wavuswa kwabafileyo liLizwi likaThixo. Kwaye ngeli Lizwi linye ukuba uThixo usaqhubeka azityhile kuthi.
Le ncwadi oluhleli zingabanjwanga kwi kwithala lakho iliLizwi likaThixo ongusomandla. Ingcwele, engcwele, oyinyaniso, nonamandla kuchulumancisa.
Xa uThixo ngokwakhe ethetha ukuba kufuneka sitshintshe indlela siphulaphule.
KdMeads • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 11:32 mna • impendulo
Kuhle! Kufuneka I ngaphezulu!
Latisha • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 11:34 mna • impendulo
Ndandikuthanda ngokwenene ukufunda le nto kwandinceda ngaphezu uyazi. Thanks❤
Clarence • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 11:38 mna • impendulo
Le posi echukumisa kakhulu. Kwandenza ndaqonda ixabiso ilizwi kaThixo nendlela isicelo ebomini bam ngemihla. Qhubeka wenza umsebenzi olungileyo Wafaka kwi Trip ebomini bakho!!!
tee • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 11:44 mna • impendulo
Omg! Ingongoma yesibini kanye oko iNkosi abalungiselela mna ngale mvakwemini.. Makabongwe uThixo sokutyhilela ngaphezulu! Esi sisithuba mkhulu igama leNkosi azukiswe..
Rosalinda • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 11:53 mna • impendulo
Yiyo le nto ezihlaziyayo ndiyifundile imini yonke. Thnx ngenxa yokuba ukukhanya kwihlabathi yaye ezukisa uThixo!!
Shauneil • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 12:08 pm • impendulo
inkcazelo Perfect yelizwi likaThixo nendlela esebenza ngayo kubomi bethu.
Jerome • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 1:56 pm • impendulo
BoomSauce! Ndimthanda a bhuti iqashiso! wawufanelekile kwaye kakhulu wathi ngokucacileyo… the “All of iSibhalo”
tony kachule • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 2:08 pm • impendulo
Mna ukufumana ingqiqo kakhulu koko u abaye bathi,kuye makubekho uzuko,yam ukuxoxa kabanzi!!
Khankanya: 5 amagama vs 5 ubuxoki …yi Trip Lee | Bro. uJerome
Athenkosi Nogcinisa • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 2:12 pm • impendulo
Uhambo Dear Lee
Loo mazwi wawathetha ngokwenene kum kuba ekuqaleni nje phezu ndijonga bible yam, “ukuba ubudala” kwaye “Ngaba kufuneka ufunde ngokwenene?”.Le blog wayitshintsha indlela ndikugqala bible.God wam Bless Wena Ndiyabulela
kebron • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 2:40 pm • impendulo
kuhle! lo ngokwenene ndinoyolo. enkosi unjani into u ntoni :)
CodyMcCracken • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 4:08 pm • impendulo
Nantso inyaniso kwaye hits le ndawo!! Wonke umntu kufuneka imiyalezo amanyathelo ngeenzwane zabo.
Joel • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 5:13 pm • impendulo
Njenge 19 yr omdala, Ndiziva ngathi u inxulumene ne isizukulwana sam.
bafuna nje ukuba athi, Ndiyayibulela ur ukwenza ntoni.. kwaye ur lo mfo kuphela ukuba uyakwazi ukuphulaphula ukushumayela ngenxa 1 iyure ngaphandle ukuqhwanyazaemva! Ndinqwenela ukuva ngakumbi iintshumayelo ur phezulu kule sayithi plz!
Debbie • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 9:46 pm • impendulo
Jessica • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 9:48 pm • impendulo
Amen! Ngoko ntiyiso ndiyithanda kakhulu le blog! enkosi kakhulu le ukuqonda kunye amazwi akhuthazayo! :-)
CherishJesusLuv • EyoMsintsi 5, 2013 ngexesha 11:33 pm • impendulo
Le Blog igcinwe nje luba ngcono.
Bible My engekho kwithala mna kuHezekile 24. Mna ukufunda ngqo bephosa. Kodwa andizange ndiyifunde into enjengale….Indlela azichazayo iYerusalem iphambene. Andikwazi phantse zintlungu kaThixo yaphosa kwesi sahluko njengoko ichaza le uMgwebo.
Limon • EtiMnga 9, 2014 ngexesha 11:08 mna • impendulo
Wow kufuneka uvume ukuba wenze iingongoma ezithile treanhnct kakhulu.
ReneeB • EyoMsintsi 6, 2013 ngexesha 9:00 mna • impendulo
ngokwenene?! Oku kuhle kakhulu!!! Musa Wakhe wacinga ukuba akuyi wenza ngokwaneleyo okanye esithi ngokwaneleyo kunye nobomi bakho.. khumbula nje oko Waqokelela kwakho kwaye uya kukhawuleza ubone oko Wakwenzayo, kwaye akwenzayo.. Yena usebenzisa wena enamandla!!! Siyabonga yonke into oyenzileyo, kunika ithemba!!!!!!
Omario. • EyoMsintsi 6, 2013 ngexesha 1:53 pm • impendulo
Elowo IZWI, kusetyenziswa kwaye bacamngca phezu ngesibindi kunye nokuzimisela,
Ngoko ke Wabangela amandla aokusetyenziswa kutyhilwa phezu Kuthi nguMoya oyiNgcwele kuYesu Kristu Igama.
ollilovely • EyoMsintsi 6, 2013 ngexesha 2:12 pm • impendulo
Siyabonga ngokwabelana la mazwi obulumko! Iyandikhumbuza ukuba izithembiso zakhe nje uzive-kakuhle amagama okanye ucaphulo idolo kunye nokukhuthaza… ukuba lukhulu…ke ukuba inyaniso kaThixo phezu ebomini bethu. #Ndiyayithanda!
Makabongwe uNdikhoyo ngenxa ubulumko kunye nothando obungapheliyo wenza kwabonakala ngeLizwi lakhe elingcwele. Kwaye enkosi uvakalelo lwakho ukuba uMoya wakhe. Ndiyathemba ukuba wena yam mini kuya kufika abantu ngendlela lenu! Qhubeka ukushumayela, Bro!
Khankanya: Countdown- Usuku 9: Izithembiso zakhe Real! | ollilovely
wayne dre • EyoMsintsi 6, 2013 ngexesha 6:34 pm • impendulo
Ndiyambulela uThixo kuba kwaloo ntambiso aye iindawo ubomi bakho o wayeyithanda blog kwaye sijonge phambili ekufundeni ngakumbi. UThixo ngokwenene wabasikelela ubulumko onayo
Terran • EyoMsintsi 6, 2013 ngexesha 11:47 pm • impendulo
uhambo, oko yinto ndicinga sonke deal with ingakumbi xa loo umlilo afe phantsi. Ndibona abanye ukuba iincwadi ezibhalwe ngabanye ababhali enika iimbono zabo izibhalo kodwa bona silibale ukuba iBhayibhile UThixo umphefumlele. Ngalo lonke ixesha yisa iBhayibhile njengogunyaziwe eziphezulu!
Khankanya: NgoMgqibelo Memezani-outs: Kansas City, pine eBluff, & Ministry Links | H.B. Charles Jr..
JosephBonacci • EyoMsintsi 7, 2013 ngexesha 12:15 pm • impendulo
Entle. uThixo’ igama guquka. Kuyinto enye ke namhlanje njengoko kwakunjalo kwiminyaka engamawaka eyadlulayo yaye uya kuba ngamawaka bokwenyaniso eminyaka ukususela ngoku. Umntu othanda kokulungiswa, utshintsho, iqondwe, uze uliphathe iinjongo zakhe. Lifunde, ukufunda oko, ukuphila kube. Yiba ngumenzi welizwi. Identityfulfilled.com
Ukukhathalela • EyoMsintsi 9, 2013 ngexesha 7:06 mna • impendulo
Kutheni iBhayibhile hayi iKurani / Bhagavad Gita / ITalmud / etc.?
ultramarin • EyoMsintsi 10, 2013 ngexesha 1:54 mna • impendulo
Andikwazi ukuchaza kufuneka oku indlela, kwaye indlela esinombulelo mna ukuba waliphulaphula ilizwi likaThixo njengoko lo myalezo libhalwa. Enkosi!
david Williams • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 1:15 mna • impendulo
Khankanya: Ubuncwane Daily | baziqwebele Kristu
Walker • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 10:55 mna • impendulo
“tastebuds nesono,” Ndiyakuthanda oko. Yinto Kuliqiniso. Ndiya kuza ngeLizwi zalala. Loo nto ezimbi. I kufuneka baguquke kwaye cela kuThixo ukuba avule amehlo am kwaye anelise me, njengomdumisi. Qhubeka ukubhala nibalungiselela Uhambo, ukuba nenza into entle. kuyakhuthaza kakhulu kwaye phantsi emhlabeni.
Chelsea • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 8:56 mna • impendulo
WOWU. Ngamnye ingongoma ilungile yaye wandinika nombono entsha eBhayibhileni. Enkosi ngokuthetha inyaniso kaThixo. Kuba toughing ubomi abaninzi.
Victoria • EyeDwarha 26, 2013 ngexesha 7:37 pm • impendulo
Le nto i kwakufuneka ,
Khankanya: 5 imibono (amanga) kwiLizwi likaThixo | Ndifunda iBhayibhile